Naya Bikalpa | बोली ‘डिलिट’ हुने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री - Naya Bikalpa बोली ‘डिलिट’ हुने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री - Naya Bikalpa
बोली ‘डिलिट’ हुने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिती: २०७६ बैशाख ३०, ०८: २२: १५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुका प्रश्नलाई ‘निम्छरा’को संज्ञा दिएपछि अन्त्यत उनकै बोली डिलिटमा प¥यो संसदबाट । बृहत् नेपाली शब्द कोषमा ‘निम्छरो’ भन्ने शब्दको अर्थ यसरी दिएके छ ः ‘(निम्नस्तर) १. धन, बुद्धि, विद्या आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर । २.दुब्लो पातलो, निर्बलियो ।’
यसको अर्थ हो संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई धन, बुद्धि, विद्या आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर, दुब्लो पातलो र निर्बलियो देखे । यो आरोप होइन । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट प्रकट भएको शव्दको अर्थमात्र हो । यो शव्दबाट यतिकुरा बुझाउछ भनी जानी बुझिकन प्रयोग भएको देखिन्छ वा बुझाउछ ।
यता यो शव्द संसदमा रेकर्ड राख्न लायक नभएको भनी त्यसलाइ डिलिट गरिसीकएको छ । संसदको अभिलेखमा डिलिट भएपनि सर्वसाधारणको मनबाटचाहि त्यस्तो डिलिट भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका आजसम्म बोलेका कुनैपनि बोली विवादरहित भएनन् । ओलीको पहिलोकार्यकाल अलि कम थियो तर दोस्रो कार्यकालमा त अतिनै भएको महसुस आमतहमा भयो । हरेक कुरा उनले व्यंग्य गरेका हुन कि सत्य बोलेका भन्ने छुट्याउनै गाह्रो पर्ने भएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखका बोली यस्ता किन भए ? मानसिक कारणपनि छ कि ? मनोविज्ञ डा. गंगा पाठक भन्छन–‘ठूला नेता भनेको वास्तवमा देशका रोल मोडल हुन् । उनीहरुले बोलेको कुरा धेरैले सिक्ने गर्छन त्यसको ठूलो असर पर्दछ । तर, हाम्रा नेताहरु भने एक आपसमा गाली गलौज गरिरहेको देखिन्छ । त्यसले देशको समाजमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने उहाँहरुले बुझेको जस्तो देखिएन’
दुइतिहाइ संख्याको नेकपाको सरकार प्रमुख प्रधामनमन्त्री ओली धेरै बोल्नेमा पर्छन तर उनका बोली कस्ता हँुदा रहेछन उनको पछिल्लो अर्थात दुइतिहाइ हैसियत बनेको कार्यकालको करिव एकै वर्षको अवधीमा प्रकट भयो । स्थिति कस्तोसम्म भने संसदले उनको बोलीलाई दुइदिनमात्र पनि रेकर्डमा राख्न सकेन । फलतः ओली नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक त्यस्तो प्रधानमन्त्रीका रुपमा दर्ज भए जसको बोलीलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन प¥यो ।
ओली नेकपाका संसदीय दलका नेता हुन् भने उक्त पार्टीका अध्यक्ष पनि । उनले बोलेको विषयलाई सभामुखले रुलिङ गरेर रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए । यो बैशाख २७ को कुरा हो जो भर्खरै सरकारकै नीति र कार्यक्रममा छलफल सकिएको थियो । यस्तो निर्देशन त्यस्तो व्यक्तिबाट भयो जो नेकपाकै नेता हुन् । यसले बुझाउँछ वाध्यात्मक अवस्था भएर मात्र प्रधानमन्त्री ओली रेकर्डबाट हटाइएका हुन् । यो पनि यस्तो बेला भयो जुन बेला उनी विदेशको औपचारिक भ्रमणमा थिए । अनुमान गर्न सकिन्छ यसको सन्देश त्यहा कस्तो पुग्यो होला ।
यो डिलिटले बुझाउने कुरा हो प्रधानमन्त्रीका बोली कति अवाच्य हुँदा रहेछन् । प्रधानमन्त्रीको पद संसदको नेता पनि हो । संसद् भनेको सरकारले प्रस्तुत गरेका कामकुरा मात्र गर्ने निकाय हो । त्यो काम कुरा निर्सत वा आश्रित हुने पदाधिकारी हो प्रधानमन्त्री । जव संसदमा उनै अवाच्य बोल्छन् भने त्यसपछि कसले कसको भरपर्ने र मर्यादा राख्ने भन्ने प्रश्न उठछ । नेता अनुकरणीय भएनन भने कार्यकतामबाट त त्यस्तो आशै गर्न सकिन्न जो स्वाभाविक पनि हो ।
समाचार विवरण यस्ता छन् – सरकारले प्रस्तुत गरको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा बैशाख २४ मा संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित विपक्षी सांसदले बोलेका केही शब्द असंसदीय भएको भन्दै हटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २७ बैशाखको संसद बैठकमा रुलिङ गरेका हुन् ।
यसले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई सभामुखले रुलिङ गरेर रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएको अवस्था आयो इतिहासमै लेखिने गरी । यसले कम्युनिष्ट पार्टीको शासन कतातिर जादैछ भन्ने पनि संकेत गर्छ । सरकार नीति काम वा जे भनौ सबैकुरा आउने ठाउँ बोलीनै हो । नेताका त्यस्ता वोलीमा यो हदसम्मको दूर्वाच्य हुन्छ भने अरुकुराको अन्दाजा गर्न सकिन्छ नै ।
त्यसदिन सभामुख महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुने वित्तिकै भने, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नरहेका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’ नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुण्ठा युक्त र निम्सरा प्रश्नको जवाफ दिन्न’ भनेपछि संसदमा विवाद भएको थियो ।
सभामुखको रुलिङपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले बोलेका विषय मात्र किन रेकर्डबाट हटाउने भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख महराले विपक्षी सांसदहरुले बोलेका असंसदीय भाषासमेत समेटिएको भन्दै थामथुम पारेका थिए । स्वाभाविक छ प्रधानमन्त्रीले यस्ता बचन प्रयोग गरेपछि त्यसको प्रतिकृयामा संसदहरुले पनि त्यस्तै केही बोले होलान तर कहा प्रधानमन्त्री र कहाँ सासद ।
सभामुख महराको भनाइ मान्ने हो भने त यहा सांसदहरु पनि पर्दैनन । सम्वाोधन प्रधानमन्त्रीले बोलेकामा छ र विपक्षी सांसदहरुले बोलेका असंसदीय भाषा समेत समेटिएको भन्नेकुरा प्रतिकृयामा आएका हुन् । त्यो नसमेटिएको पनि हुन सक्दछ । तर पदीय हिसावले प्रधानमन्त्री र सांसदको हैसियत धेरैनै फरक हुन्छ ।
रुलिङको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया आएन । ओलीनिकट समूह ‘सभामुखको रुलिङ हामीलाई चित्त बुझेको छैन, यसबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ, रुलिङनै गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभए जस्तो हामीलाई लाग्दैन भन्ने सम्का कुरा त आयो तर नाम खोलेर कसैले पनि यस्तो प्रतिकृमया दिएको पाइएन । यो दलको संसदीय दलका उपनेता त नेपालमै थिए । यस्तो प्रधानमन्त्रीको भनाइ रेकर्र्डबाट हटाइएको बारे उनको पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन ।
विपक्षीको ठहर सत्य भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेका असंसदीय शब्द अभिलेखबाट हटाइयोस भनी विपक्षीले त्यसै दिनमाग गरेका थियो । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा ‘निम्छरो’ शब्द प्रयोगप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीले नाराबाजी गरिहेकै बेला सभाममुखबाट यो कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरिएको थियो
प्रतिनिधिसभाको सोदिनको बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरू वास्ता नगरेर प्रश्नको जवाफ दिन्छु’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकामा यस्तो विरोध आएको हो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै यो शब्दावली अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको थियो ।
पछिल्लो बैठक सुरुमै सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा प्रतिकूलका शब्द रेकर्डबाट हटाइएको जानकारी गराए । उनले भने ‘अस्ति मेरो ध्यानाकर्षणको विषयमा नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादाअनुकूल नभएका शब्द अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु’,
बोली कस्ता थिए, कसकसका बोली हटे भन्ने भन्दापनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द अभिलेखबाट हटाइएको यो पहिलोपटक नै हो । २०४८ सालपछि निरन्तर निर्वाचित सांसद हृदयश त्रिपाठीका अनुसार ‘मन्त्री र सांसदले बोलेको शब्द गैरसंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाइएको इतिहास छ तर प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाएको थाहा छैन ।’ सांसद त्रिपाठी तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित हुन । अर्थात सत्तारुढदलकै सदस्य । उनले दिएको जानकारी बढी आधिकारिक होला । विगतमा केही उदाहरण कायम छन ।
२०६३ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादी सांसद लोकेन्द्र बिष्टले संसद्भित्रै पेस्तोल लिएर आउने चेतावनी दिएका थिए । उनले बोलेको सो वाक्य तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले अभिलेखबाट हटाउन लगाएका थिए । यस्तै २०६४ सालमा गठित संविधानसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादीका सांसद गोपाल किरातीले ‘संविधान जारी गर्न नदिए नदिनेलाई खरानी बनाएर खरानीमाथि संविधान जारी गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष नेम्वाङले सो शब्द तत्कालै अभिलेखबाट हटाएका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि व्यवस्थापिकाको हैसियतमा बसेको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले ‘६ सय एक सांसद, भेडीगोठ जस्तो भयो, संविधान बनाउन सकेन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले बोलेको ‘भेडीगोठ’ शब्द अभिलेखबाट हटाइएको थियो । २०१६ सालमा पनि एकजना सांसदले ‘नालायक’ शब्द प्रयोग गरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले सो शब्द अभिलेखबाट हटाउन लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको ‘निम्छरो’ शब्दको अर्थ नेपाली बृहत् शब्दकोशमा कमजोर, नाजुक, निम्नस्तरको भनी अथ्र्याइएको छ । यसको अर्थ हो आफु र आफना बाहेक बाकी सबै निम्छरा हुन । बृहत् नेपाली शब्द कोषमा ‘निम्छरो’ भन्ने शब्द उल्लेख छ त्यसलाई सायद प्रधानमन्त्रीले बहुवचनमा प्रयोग गर्दा निम्छरा भनेका होलान् । त्यसको शाब्दिक अर्थ बृहत नेपाली शब्दकोषमा भनिएको छ ,‘( निम्नस्तर) १. धन, बुद्धि, विद्या आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर । २.दुब्लो पातलो, निर्बलियो ।’
वास्तवमानै प्रधानमनीकोयो शव्द आपत्तिकै थियो । सांसदहरलाइ सममानवाचक शव्दले सम्वोधन गरिन्छ संसदमा सभामुखले पनि माननीय भनी बोलाउछन । त्यसोहो भने विपक्षका ती सबैमाननीय प्रधामनमन्किा लागि निम्नस्तर) १. धन, बुद्धि, विद्या आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर । २.दुब्लो पातलो, निर्बलिया ’ नै हुन भन्ने सधेभरकिा लागि परिचय बन्ने थियो यदि यो नहटाइएको भए ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सांसदले प्रश्न सोध्नु त्यति अनौठो कुरा होइन । उनीहरुले त्यस्तो खासै गलत लाग्ने कुरा पनि सोधेका थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ रुखो हिसाबले आयो । उनले भोलिपल्ट नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने आफ्नो नियमित अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेसले आफूलाई अपमान गरेको समेत दाबी गरे ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरु लोकतान्त्रिक मुलुकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न ओहोदामा भएका व्यक्तिले जवाफ दिन्न वा यस्तो उस्तो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको बोली जेसुकैमा रुखो पाइने गरेको अवस्थामाने यहकुरा दोहोरियो त्यसदिनपनि । यसले के ओहदामा रहेका व्यक्तिले यसरी जथाभावी बोल्नु ठीक हो ? भन्ने प्रश्न सवृत्र उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारले धमाधम ल्याउन लागेका कानुनका कारण सरकार निरंकुशतातर्फ जान लागेको संकेत हुन थालेको भन्दै धेरैतिरबाट अहिले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको थियो ।
प्रधानमन्ीले अरुका कुरालाइ त्यसरी होच्याउनुको पृष्ठभूमिमा निरंकूशताकै झल्कोमा थियो । विपक्षमा थिको प्रहारले बुझाउने त्यहीहो । यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधन मस्यौदा, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि आउन लागेको कानुन, मिडिया काउन्सिल ऐन जस्ता कतिपय कानुनले गर्दा सरकार स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न जुटेको जस्तो देखायो । प्रधानमन्त्रीका यी भनाइ त्यसैका उदाहरणका रुपमा लिएकाथिए पर्यवेक्षकरुले ।
तर यसलाइ रेकर्डबाट हटाइसेकपछि यसलाइ पाठका रुपमा लिइन्छ कि थप प्रतिशोधतर्फ लागिन्छ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री फर्किएपछि नै प्रकट होला । एउटा डर के छ भने प्र्रंधानमन्त्री फर्किएपछि उनको बोलीलाई डिजिट गराउने सभामुख नै डिजिट हुने हुन कि भन्ने आशंका बढेको छ । ओलीको अहिले सम्मको चरित्र नै आफुमाथि अलिकति औला देखाइयो भने त्यसलाई शव्दवाणले र कामवाणले समाप्त पारिदिने ।
संसदको रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको बोलि हटनु वा मेटिनु भनेको चानचुने आरोप होइन । यो दिनदेखि उनकाबोलीको प्रत्येक दिन परीक्षण हुनेछ संसदमा । यतिबेला नै प्रधानमन्त्री कति अमर्यादित छन भन्ने तल्लैतहसम्म कुरा पुगिसेको छ । यो बढदै जाने पक्का नै छ । यी सबैले पनि उनी फर्किएपछि यो काण्डप्रति के गर्छन भन्ने चासो बढेको हुनुपर्छ ।
२०७६ बैशाख ३०, ०८: २२: १५